Saldhigga Ciidamada Dowladda Burundi Ee Mahadaay Oo La Duqeeyay. – Bogga Calamada.com
Saldhigga Ciidamada Dowladda Burundi Ee Mahadaay Oo La Duqeeyay.
Ciidamada dowladda Burundi ee qaybt ka ah duullaanka ay ciidamada shisheeye kusoo qaadeen wilaayaadka dalka Soomaaliya waxay 24 saac gudahood la kulmeen weeraro is xig-xigay oo loo adeegsaday madaafiic. kuwaas oo siyaabo kala duwan loogu garaacay saldhigyada ay kaga suganyihiin Sh/dhexe.
Weerar cusub oo loo adeegsaday Hoobiyeyaal ayay ciidamada Mujaahidiintu ku garaaceen saldhigga ciidamada kuffaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa Burundi ay ka deganyihiin degmada Mahadaay oo ka mid ah degmooyinka ay xoogga ku haystaan ciidamada Shisheeye.
Ilo xo-ogaal ah oo ku sugan degmada Mahadaay waxay wariyeen inay arkayeen madaafiic xilli gudcur ah ku hoobanaysay salddhigga ciidamada kufffaarta Burundi ee degmada waxaana jira khasaare kala duwan oo ciidamada shisheeye kasoo gaaray madaafiicda Mujaahidiinta.
Dhinaca kale waxa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa weerar madaafiic ah oo habeen hore ciidamada Mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga ciidamada kuffaarta Afrikaanta ay ka samaysteen degaanka Ceel-baraf oo hoos taga degmada Mahadaay.
Wararkii ugu dambeeyay waxay tibaaxayaan in madaafiicidii ay ciidamada Mujaahidiintu ku dhufteen gudaha saldhigga ciidamada Burundi ee Mahadaay ay ku dhaawacmeen tiro askar ah oo ka tirsan ciidamada kuffaarta Burundi.
Weeraradan madaafiicda ah waxay kusoo beegmayaan xilli ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay sare u qaadeen weerarada duqaymaha ee ay la beegsanayan xarumaha iyo saldhigyada millatari ee ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ay ka samaysteen qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya.